Herisetra ao an-tokantrano :: Mangataka fisarahana ny ankamaroan’ ireo vehivavy mitaraina • AoRaha
Herisetra ao an-tokantrano Mangataka fisarahana ny ankamaroan’ ireo vehivavy mitaraina
Mitaky fisaraham-panambadiana avokoa ny ankamaroan’ireo vehivavy tonga mitaraina sy mangataka torohevitra etsy amin’ny Borigady misahana ny vehivavy manakaiky vahoaka (BFP). Ny 80%-n’izy ireo no manana an’izay hevitra izay rehefa tonga ao amin’io borigady manokana io.
Ny tsy fahafantarana ny vokatry ny fisarahana no mahatonga azy ireo mihevitra toy izany, araka ny fanazavan’ny mpitandro ny filaminana misahana ny fandraisan-tanana ireo vehivavy iharan’ny herisetra, eny Tsaralalàna.
“Omena torolalana izy ireo tsy hiroso amin’ny fisarahana. Manaiky ny hiroso amin’ny fandaminana ny ankamaroan’izy ireo, aorian’ny fifampiresahana”, hoy Ravelonjanahary Holy, mpitantsoratra ao amin’io Borigady misahana ny vehivavy manakaiky vahoaka io, omaly. Ny herisetra ara-toekarena, izany hoe fitarainana noho ny lehilahy tsy mamelona sy tsy manome vola ara-dalàna ao an-tokantranony kosa, ny ankamaroan’ny fitarainana. Faharoa manaraka azy ny fijangajangana.
Anisan’ny tranga na fitarainana voaray tao amin’ny BFP ny nanjo ny renim-pianakaviana iray. Nanome izay foiny sy tamin’ny fotoana tsy voafetra ny vadiny nandritra ny fotoana nisaharahan’izy ireo. Mitaky vola ara-dalàna kosa anefa izy rehefa fantany fa nisora-panambadiana tamin’ny vehivavy hafa ilay vadiny. “Tsy maintsy alefa any amin’ny Fampanoavana ny tranga raha tsy mpivady ara-dalàna izy ireo. Ny tompon’andraikitra any indray no misahana ny raharaha, aorian’izay”, hoy indray iry loharanom-baovao iry.
Miisa sivy amby sivifolo amby zato ireo olona nitoroka ny herisetra teny amin’ny BFP, tamin’ny taona 2019. Efa nahatratra fito amby efapolo kosa ireo nandalo tao tamin’ny fiandohan’ny taona hatramin’izao. Tsapan’ny ao amin’ny BFP fa tanora latsaky ny 40 taona avokoa ny ankamaroan’ireo olona tonga mitaraina. Ilay niharan’ny herisetra na ny fianakaviany ihany no tonga mitory fa tsy mbola sahy ireo olon-tsotra na ny mpiara-monina aminy.
Famatsiana herinaratra :: Hampihena ny saran-jiro ny fahavitan’ny tetikasa Volobe
Toetr’andro :: Nanomboka nikija ny orana tany amin’ny faritra maro